Bayern Munich,Manchester City, Barcelona, Juventus,Paris Saint-Germain oo difaacday Koobabkooda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Bayern Munich,Manchester City, Barcelona, Juventus,Paris Saint-Germain oo difaacday Koobabkooda
Kooxda Bayern Munich ayaa noqotay kooxdii ugu danbeysay ee difaacata horyaalkeeda ka dib markii ay maanta xaqiijisteen ku guuleysiga horyaalka Bundesliga oo ay ka qaadeen kooxda Borussia Dortmund oo tartan adag u gashay xilli ciyaareedkan.
Bayern Munich ayaa kulankeedii ugu danbeeyay ee xilli ciyaareedka Bundesliga waxa ay u baahneyd guul si ay u xaqiijistaan hanashada horyaalka, waxaana ay 5-1 ku xasuuqeen kooxda Frankfurt.
Halyeeyada Frank Ribery iyo Arjen Robben oo ka tagaya kooxda xagaagan ayaa ku macalaameeyay kooxda labo gool ay dhaliyay kulankii maanta.
Bayern Munich waxa ay ku biireysaa Manchester City oo difaacatay horyaalka Ingariiska oo ay hal dhibic kaga qaaday Liverpool, Barcelona oo difaacatay horyaalka La Liga, Juventus oo mar kale difaacatay horyaalka Serie A iyo Paris Saint-Germain oo iyadana difaacatay horyaalka Faransiiska.
Xilli ciyaareedkan iyo kii ka horeeyay waxba iskama bedelin kooxaha ku guuleystay horyaalka shanta horyaalo ee ugu waa weyn qaarada Yurub.
Awooda kooxaha Bayern Munich, Barcelona, Juventus, Manchester City iyo Paris Saint-Germain ayaa ah mid muuqata iyagoo ku guuleystay inay difaacdaan horyaaladooda.
Laakiin midkoodna kooxahaas kuma aysan najixin Champions League xilli ciyaareedkan iyadoo labo kooxood oo Ingariis ah oo ku kala dhameystay kaalimaha labaad iyo afaraad ee horyaalka Premier League ay isagu soo hareen finalka la ciyaari doono 1da bisha Juun.
Shanta kooxood ee difaacday horyaaladooda ayaana isku dayi doona inay xilli ciyaareedka danbe ka muuqdaa tartanka ugu qiimaha badan kooxaha Yurub ee Champions League iskana dhaqaan ceebtii soo gaartay xilli ciyaareedkan.